Kudzokorora mushandirapamwe, maitiro ekuronga imwe kuti ibudirire? | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Updated on 10/08/2021 15:37 | Imba yeGreen, Environment
Tese tinogona kuronga a marara mushandirapamwe muguta redu, sezvo zvakajairika kuti hapana zvirongwa zvekuparadzanisa, kuunganidza uye kudzokorodza marara ese anogadzirwa.
Ndokusaka chikoro, NGO, kirabhu, makambani uye mamwe masangano anogona kuronga maratidziro ekudzokorora ayo anosimudzira iyo marara emarudzi ese emarara. Kana iwe uchida kuronga imwe, heino nhungamiro yekutevera.
1 Matipi emushandirapamwe wakabudirira wekushandisazve
1.1 Tingaite sei kuita mushandirapamwe wekushandura zvinhu kuchikoro?
2 Maitiro ekukurudzira vanhu kuti vashandise zvakare?
2.1 Ndezvipi zvikamu zvinokurudzira mushandirapamwe senge kudzokorora?
3 Inofanira kushandiswazve sei?
4 Chii chatingaite kuvandudza marara marara?
5 Nzira yekugadzira mushandirapamwe wekuunganidza marara?
Matipi emushandirapamwe wakabudirira wekushandisazve
Kuti mushandirapamwe wekushandisa zvakare ubudiriremamwe madhairekitori anofanirwa kutariswa senge:
Kudzokorora mushandirapamwe une yakatarwa yekutanga uye yekupedzisira nguva, kana isina kushandurwa kuita zvirongwa. Pane zuva rekutanga uye zuva rekuguma.
Chakanaka kukurukurirana Munzvimbo makarongerwa mushandirapamwe, mhando dzese dzenhau dzakadai semaposita, kushambadza, pasocial network, pasuo nesuo, pakati pevamwe, inofanirwa kushandiswa
Ipa ruzivo rwakajeka paunenge uchiparadzira mushandirapamwe kuitira kuti munhu wese anzwisise meseji uye kuti ichaitwa sei.
Usati watanga mushandirapamwe, unofanirwa kutarisira zvichaitwa nemarara kana zvinhu zvinounganidzwa.
Sanganisira ese magariro uye enharaunda zvikamu kuti zvibudirire zvechokwadi.
Ipa sarudzo uye mafomu ekutora chikamu kuvagari kuti vanhu vazhinji vagone kubatana.
Kana mushandirapamwe wapera, zvabuda zvinofanirwa kutaurwa munhepfenyuro dzakasiyana kuitira kuti avo vakatora chikamu vazive kuti zvakapera sei uye nezvakawanikwa.
Kudzokorora mushandirapamwe unogona kudzokororwa asi zviri nyore kuve nehunyanzvi uye kutaurirana neimwe nzira.
Mushandirapamwe wekugadzirisazve unogona kuve wemunharaunda, wedunhu uye kunyangwe wenyika. Vanogona kutarisa pane huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa kana zvigadzirwa zviri marara asi hazvifanire kuraswa sezvaizogadzira kusvibiswa pamusoro pekutambisa zviwanikwa.
Recycling inofanira kuve nzira huru yekugadzirisa marara, mumaguta ese, mataundi uye nyika marara anofanira kusimudzirwa. Nenzira iyi unenge uchinge uchidzivirira iyo nzvimbo.
Mushandirapamwe wakanaka wekudzokorodza inofanira kusimudzira ruzivo uye kuzivisa nezve kudiwa kwekushandisa patsva uye upe ruzivo rwekuti ungazviita sei.
Wati wamboronga mushandirapamwe wekushandisazve? Ndeapi matanho awakatora kuronga izvi?
Kuti uve wakakwana, usakanganwa kutsanangura zvinorehwa nemavara ari pamabhini ekudzokorora:
Tingaite sei kuita mushandirapamwe wekushandura zvinhu kuchikoro?
Kukurudzira kudzokorodza kubva paudiki kazhinji sarudzo huru kuitira kuti vagone kupinza tsika idzi muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Kana isu tikadzidzisa vana kudzokorora kubva vachiri vadiki, tinovaita kuti varambe vachizviita zvoga otomatiki mune ramangwana. Ngatione kuti ndeapi makiyi kuitira kuti mushandirapamwe wekudzokorodza kuchikoro ugone kushanda nemazvo:
Dzidzisa ma3R uye kukosha kwawo
Tanga nekirasi yekudzokorora hurongwa
Dzidzisa uye sarudza midziyo yekuchengetera zvese zvinoshandiswa muhunyanzvi
Shandisa zvakare zvinhu zvese zvinogona kushandiswa kumwe kunhu
Ita zviitwa kuitira kuti vana vakwanise kushandisa zvinhu zvakashandiswazve
Tsanangura kukosha kwekugeza maoko ako mushure mekugadzirisa zvinhu
Ronga kutungamirirwa kwekushanya kwenzvimbo dzekushandisazve nzvimbo
Maitiro ekukurudzira vanhu kuti vashandise zvakare?
Kukurudzira vanhu kudzokororazve, unofanirwa kukurudzira neimwe mhando yemubairo. Iwe unogona kusarudza kugadzira mushandirapamwe wekupa kukurudzira tsika yekusashandisa bepa kana kurongedza kana zvisiri izvo. Kuti ugone kupatsanura marara, zvakakosha kuve nemabhini ekugadzirisa zvakakwana izvi.
Unogona kupa matoyi, mbatya uye mabhuku asingakushandire kuti mumwe munhu azvishandise zvakare. Chinhu chakanakisa ndechekutaurirana zviito zvese izvi uye kukurudzira kusvika kune imwe mhando yechinangwa kudzikisira kukanganisa kwenzvimbo kwezuva nezuva.
Ndezvipi zvikamu zvinokurudzira mushandirapamwe senge kudzokorora?
Kuti uwane vanhu vazhinji kuti vashandise zvakare Zvinogara zvichinakidza kupinda mukubatana nemasangano asiri ehurumende, nzvimbo dzekudzidzisa, kana kunyange nzvimbo dzemitambo ndedzipi zvikamu zvinogona kukupa iwe rubatsiro rwakanyanya, pamwe nekukupa iwe kamuri yekupa misangano uye nekudaro kusimudzira kuziva pakati pevanhu, kana nekuisa maposta, semuenzaniso.
Inofanira kushandiswazve sei?
Kugadzirisazve nenzira kwayo zvakakosha kuti uzive mushe marara, mhando yacho uye kwainofanira kuiswa. Tsvina yakajairika inogadzirwa mudzimba dzedu zuva nezuva kuputira, mapurasitiki, mapepa, makadhibhokisi negirazi. Dzese dzinofanirwa kupatsanurwa kubva kune yakasviba marara uye kuiswa mumidziyo yavo.
Shure kwaizvozvo, isu tinofanirwa kuziva kuti chii chine ngozi kana chine chepfu marara uye kuti tingaisa kupi. Kune izvi, kune chaiwo midziyo, iwo emabhatiri, akashandisa mafuta uye akachena mapoinzi mumaguta.
Chii chatingaite kuvandudza marara marara?
Kuvandudza marara patsva, chinhu chakakosha kudzidzisa zvakanaka uye kuziva zvakasiyana mhando dzemidziyo izvo zviripo. Tinogona zvakare kumbira makanzuru kuti avandudze marara, Kufambisa kuiswa uye kuunganidzwa kweizvozvo. Chinonyanya kukosha pane zvese kudzora mashandisirwo ekuvandudza mashandiro uye mashandisirwo ezvigadzirwa.
Nzira yekugadzira mushandirapamwe wekuunganidza marara?
Matanho ekutevera anozoita zvakati fananei sekunge isu tinoda kugadzira yekudzokorora imwe; ndiko kuti, tinofanirwa kuisa midziyo yakakodzera uye kutsanangura kuti tsvina imwe neimwe inoenda kupi. Chii chimwe, zvakakosha kusimudzira kuziva, kungave nekuratidza mavhidhiyo uye / kana mifananidzo yekusvibisa kuripo papasi, nemhedzisiro yazvinokonzera pane zvakasikwa uye pachedu.
Zvinonyanya kufadza kutanga mu kindergartens kana zvikoroZvinozivikanwa kuti kana vana vakadzidza kubva pazera diki kuchengetedza nharaunda, vangangoramba vachidaro sevanhu vakuru.
Zvishoma nezvishoma, mumwe nemumwe achiisa tsanga yake yejecha, tichakwanisa kuva nePasi rakachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Dzokororo mushandirapamwe
Ndatenda Adriana, iyo nhau yakanaka kwazvo, ndeyekuti ini ndinotsvaga uyu musoro mugoogle nekuti ndinoda kuti vanhu veCosta Rican (nyika yangu) vazive kuita izvozvo, uye kana uchida, tsvaga «rio virilla costa rica », Uye ivo vachabuda isingafadzi nhau nezve marara ayo anosiririsa akakandwa munzizi.
Ini ndinoda chaizvo zvarinotaura nekuti nenzira iyoyo tinogona kudzokorora
Gabriel Castillo chimiro chekubata akadaro
Super! Yakashanda sehwaro hwekuronga mushandirapamwe mukambani yandinoshandira.
Pindura kuna Gabriel Castillo
Nzira yekusimudza zviwanikwa zvezvakatipoteredza?
Andrea yulieth lopez chakavanzika chehondo akadaro
Ruzivo urwu rwakandibatsira zvakanyanya thanks adrian
Pindura kuna Andrea yulieth lopez chakavanzika chehondo
Mhoroi, ndinoda kugamuchira rutsigiro neruzivo rwekugadzirisa marara kubva kubasa kwangu. Isu tinoshandisa epurasitiki yakawanda uye ndinoda kubatsira nyika zvishoma.
Mhoro zuva rakanaka; Mukati medu nharaunda, isu tiri kuronga kuparadzaniswa kwemarara nemapoinzi egirini.
Yakagadzirwa nesu, ichaiswa munzvimbo imwechete, (bhatiri remabhegi gumi neshanu) tinobvumirana nekambani ichabvisa marara, isu tichaisa kamera yekudzora uye togadzirisa iyo inozviita zvisirizvo.
Zano, nderupi ruzivo rwatinofanira kupa muvakidzani, kuti azive pekuisa tsvina, nezvimwe.
Ndatenda zvikuru nenguva yako.